सल्यानका किशोरले झापामा बनाए पानी जहाज - न्यूज सञ्जाल
झापा । सल्यानमा जन्मिएका एक किशोर वैज्ञानिकले झापामा पानी जहाज बनाएभन्दा कसैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, सल्यानको सदरमुकाम खलङ्गास्थित मेल्घारीका १५ वर्षीय यी किशोरले झापाको कनकाई नगरपालिका-३ स्थित सुरुङ्गामा पानी जहाज चलाएरै देखाए ।
विजय राना नाम गरेका यी किशोर उमेरले भर्खर १५ वर्षमात्र टेकेका छन् । उनले यो अवधिमा उनले ३ वटा पानी जहाज बनाएर सबैलाई चकित पारे । पहिलोपटक उनले १० वर्षको उमेरमा सल्यानमा पानी जहाज बनाएका थिए । त्यसको ४ वर्षपछि साविकको भन्दा ठुलो अर्को जहाज बनाए । त्यसपछि अहिले सुरुङ्गाबाट करिब डेढ किलोमिटर दक्षिण सुमन थपलियाको घरमा बस्दै आएका विजयले अर्को पानी जहाज बनाएर सफल परीक्षण पनि गरे ।
शुक्रबार घर नजिकैको सानो पोखरीमा उनले पानी जहाज चलाएर देखाए । ठुला समुद्रमा देखिने जहाजभन्दा खासै फरक नदेखिएको उक्त जहाज पोखरीमा यसअघि पनि विजयले चलाएर देखाएका थिए ।
उक्त जहाजमा क्यापासिटर, इन्जिन चिसो बनाउने पपुलर फेन, पानीलाई धकेल्ने टर्वाइन, २२० भोल्टेजको व्याट्री लगायतका सामग्री जडान छन् । त्यस्तै, रिसिभर, पानीलाई अगाडि पछाडि धकेल्ने पुस एयर मोटर, सोलार कन्ट्रोल प्यानल लगायतका उपकरण जडान भएका छन् । सौर्य उर्जाबाट जहाजको व्याट्री चार्ज हुने उनले बताए । जहाजको गति बढाउन-घटाउन उनले रेगुलेटरसमेत जडान गरेका छन् ।
हालसालै निर्माण सकिएको जहाजको तौल २५ केजी छ भने चौडाइ १.५ फिट र लम्वाई ३ फिट रहेको उनले बताए । निर्माण सम्पन्न पानी जहाज ८ सय मिटरसम्म चल्न सक्छ । उनका अनुसार यो सानो पानी जहाज हो । ‘एलएमबी टावरको सहायताले यो जहाज पानीमा मज्जाले चल्न सक्छ, लगानी अनुसार जहाजको आकार र क्षमता निर्माण हुने हो’, उनले भने, ‘पानी जहाजमा जडान हुने उपकरणको आकार बढाउने र लगानी गर्ने हो भने ५ जनासम्म मानिस बोक्न सक्ने जहाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ उनले निर्माण गरेको अहिलेको पानी जहाजको लागत ३० हजारको मात्र रहेको छ ।
सुरुवातमा ९ वर्षको उमेरमा विजयले हवाइजहाज बनाएर उडाएका थिए । आकाशमा चरा उडेको देख्दा म पनि जहाज बनाउन सक्छु भन्ने हिम्मत उनलाई आयो । १८ पटकसम्म जहाज बनाएर उडाउने उनले प्रयास गरे तर सफल हुन सकेनन् । १९औँ पटकमा खलङ्गामै काजगको स्वचालित हवाइजहाज बनाएर आकाशमा उनले उडाइ छाडे । आफूले आविष्कार गरेको कागजको केही विद्युतीय उपकरण जोडिएको हवाइजहाज उडेपछि नै हौसला मिलेको उनले बताए । खलङ्गामा रहँदा व्यक्तिगत स्रोत, साधन र सामग्री प्रयोग गरेर उनले विभिन्न विद्युतीय उपकरण बनाएका थिए ।
काजगको विद्युतीय सामग्री जडित हवाइ जहाजको सफल परीक्षणपछि उनले काठ, एयरवोट फर्म लगायतका सामग्र्री जोडेर आकारमा ठुलो हवाइजहाज बनाउने प्रयासमा छन् । ४ लाखको निर्माण लागत अनुमान गरेको निर्माणाधीन हवाइजहाजको ६० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘अब ३ लाख ४० हजार कहाँबाट जुटाउने ?’
निर्माणाधीन हवाइजहाजमा उनले इन्जिनको सट्टामा ४०० भोल्टेजको मोटर र १२ भोल्टेजको ब्याट्री राखेर उडाउने प्रयास गरेका छन् । उनले भने, ‘ठुलो आकारको जहाजमा उडाउनका लागि इन्जिन नै राख्नुपर्ने भएकोले ५०० सिसीको ट्याक्टरको दुई वटा इन्जिन राख्ने निर्णय गरेको छु ।’
विजयले रिमोट कार, रोवर्ट, बिस्फोट हुने बम पनि बनाएका छन् । कतिपय बमको स्थानीय प्रशासन, पालिकाका प्रतिनिधि, स्थानीयबासी, विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीलार्ई रोहवरमा राखेर विष्फोट पनि गराएका छन् । उनले बम बनाउँदा हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रिक लगायत ग्यासको प्रयोग गरेका थिए । बारुद क्यापासिटर र बिटु बारुद प्रयोग हुने उनले बताए ।
कसरी झुकाव बढयो ?
उनले आफू समान उमेरका बालबालिकाले फिरफिरे घुमाइरहेको देखे । त्यसको अनुसन्धान सुरु गरे । फिरफिरे घुमिरहेको देखेर त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउने उनले निधो गरे । त्यसपछि नै यस्ता विज्ञानको आविष्कारमा झुकाव हुन थालेको उनले बताए ।
आकाशमा उड्ने गिद्धको पनि उनले अनुसन्धान गरे । आकाशमा गिद्ध कसरी माथि माथिसम्म उड्छ ? उनले गिद्धले उड्न लाग्दा कुदेर भुइँ छोड्न लाग्दा अनि आकाशमा पखेटा फिजाएर उडेकोसम्म अनुसन्धान गरे । ‘गिद्ध उडेको देखेर म पनि जहाज बनाउन सक्छु भन्ने लाग्यो’, उनले भने, ‘अन्तिममा बनाएरै छाडेँ ।’ बनाएका सबै साधन नेपाल सरकारको हुने भन्दै उनले गलत ठाउँमा प्रयोग नहोस् भन्नेमा उनी सतर्क छन् । उनले बनाएका सबै साधनमा ‘मेड इन नेपाल’ लेखेर नेपालको झण्डा फर्फराउन मन भएको सुनाए ।
कसरी आए झापा विजय ?
सल्यानकै शारदा नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालय, लुहापिङमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत हुँदा बनाएका उपकरणमा कसैले चासो र सहयोग नगरेको सामाजिक सञ्जालमा कसैले पोष्ट गरेका थिए । उक्त पोष्ट झापा सुरुङ्गाका सुमन र बसन्त थपलियाले भेटे । विलक्षण प्रतिभाका किशोरले पैसाकै अभावमा आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको गुनासो थपलिया दाजुभाइलाई महसुस भयो ।
सुमनले भने, ‘हामीले उनलाई केही न केही गर्न सक्छौँ भनेर झापा बोलायौँ ।’ स्थानीय कनकाई मावि सुरुङ्गामा विजयलाई कक्षा ९ मा थपलिया दाजुभाइले भर्ना गरिदिए । दिउँसो उनी विद्यालयमा नै हुन्छन् । बिदाको दिन अनि साँझ र बिहानको समयमा फुर्सद निकालेर उनी जहाज लगायतका अन्य उपकरण बनाउने कार्यमा व्यस्त हुने गरेको सुमनले बताए ।
उनलाई आवश्यकीय बस्तुको खरिद थपलिया दाजुभाइले खरिद गरिदिने गरेका छन् । नेपालमा पाउने सामान नेपालमै खरिद हुन्छ, नपाउने छिमेकी भारतका विभिन्न ठाउँमा खरिद गरेर ल्याउने गरेको सुमनले बताए ।
थपलिया दाजुभाइका अनुसार विजयलाई सहयोगको आवश्यक छ । उनको प्रतिभालाई स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारले पनि देख्न जरुरी छ । नेपालमा विलक्षण प्रतिभाका मानिस कयाँै होलान् त्यस्ता प्रतिभाको खोजी गरेर संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको रहेको स्थानीयले बताउँछन् ।
विद्यालयमा फरक क्षमता
विद्यालयमा अन्य विद्यार्थीजस्तै उनी पनि कक्षाकै पाठ्यपुस्तक पढ्ने गरेकोे विद्यालयका प्रधानाध्यापक कर्ण डाँगीले बताए । ‘अन्य विद्यार्थीभन्दा विजय फरक क्षमता र स्वभावका छन्’, प्रधानाध्यापक डाँगी भन्छन्, ‘घामपानी, हावाहुरी आउन लागेको पनि उनलाई थाहा हुन्छ ।’
प्रधानाध्यापक डाँगीका अनुसार सल्यानमा पनि उनले कक्षा ९ उत्तीर्ण गरेका थिए । अहिले पनि उनी कक्षा ९ मै अंग्रेजी माध्यममा अध्ययनरत छन् । उनलाई चाहिने र विद्यालयको क्षमताअनुसारका सामग्री विजयलाई उपलव्ध गराउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।